Amabhulukwe Esikhumba - Zonke Izitayela Zibuyela Ekwindla | Bezzia
Zonke izinhlobo zamabhulukwe esikhumba zibuyela ekuweni
USusana godoy | 08/10/2021 10:07 | Amathrendi
Amabhulukwe ngenye yezingubo ezintsha zezinkanyezi futhi siyazi. Kuyiqiniso ukuthi uma kukhulunywa ngamakhaza, izindwangu nazo ziyashintsha ukuze zikwazi ukuzifudumeza njengoba sifisa. Kepha kukhona okungashintshi ngempela ngoba njalo isizini ubuya nathi futhi siyajabula ngakho: Ibhulukwe lesikhumba.
Zibekwe njengenye yalezo zingubo ezidingekayo ngoba ngazo sizokwakha zonke izinhlobo zezitayela nokubukeka. Ukuze sikwazi ukuhamba nabo ngezikhathi ezinhle kakhulu zosuku kodwa nasebusuku. Ngakho-ke, siyabona ukuthi ingubo yezinkanyezi nokuthi manje kufanele siyivumelanise nempilo yethu kuphela. Sizoqala?
1 Ibhulukwe lesikhumba eliqondile
2 Ibhulukwe lesikhumba elengeziwe
3 Ibhulukwe lemilenze ebanzi ngombala
Ibhulukwe lesikhumba eliqondile
Kunezitayela eziningana zamabhulukwe esinazo ngokwamathrendi.. Ngoba yize sesivele sazi ukuthi siyawuthanda umphumela osinikwa yindwangu efana nale, manje sekumele sibone ukuthi singayigqoka kanjani futhi ngasiphi isikhathi. Ngeke kube yilutho oluyinkimbinkimbi ngazo zonke izinketho izitolo zemfashini esele zisinikeza zona. Ngakho-ke, izitolo ezinjengeZara zihlala ziphakathi kwabokuqala ukukhetha njalo ukusikhombisa okuhle kakhulu futhi kulokhu amabhulukwe aqondile.
Hhayi ukuqina njengoba besicabanga kodwa ngokusika okunethezeka okukuvumela ukuthi ujabulele isiphetho sosuku nezikhathi ezikhetheke kakhulu. Ukhalo oluphakeme lungenye yezimpumelelo ezinkulu ukukwazi ukufeza induduzo esiyidingayo. Ngakho-ke, ngakolunye uhlangothi, kuyisiphetho esiphumelele kakhulu kule sizini. Kepha ngakolunye, futhi lezo ezinokuvuleka eqakaleni kanye nalezo ezisishiya nemininingwane yemikhumbi noma imicibisholo emakwe kahle endaweni engaphambili. Lokhu kuzokunikeza ubuhle obengeziwe balokho kubukeka kwehhovisi, isibonelo.
Ibhulukwe lesikhumba elengeziwe
Ngaphandle kokungabaza, kuzohlala kunesitayela esisilindile futhi ngenxa yalokho, ukugojwa kuzoba okukhetheke kakhulu. Ngoba uma sicabanga ngakho, sizohlanganiswa nokubukeka okuhlukile kepha zonke zikhululekile kakhulu. Ungakhetha ukufaka ivesti nehembe, zombili ezigqokwa kule sizini. Noma, hlala ngejezi elibanzi nelide elingakwazi ukumboza ingxenye yomzimba wakho. AmaLeggings angabonakala futhi ngezicathulo noma amabhuzu amaqakala kanye nezicathulo zezemidlalo. Okusho ukuthi, ngokuya ngengubo ephezulu oyikhethayo, ungazihlanganisa ngendlela othanda ngayo.
Ibhulukwe lemilenze ebanzi ngombala
Sivele sinezimbili ngoyedwa, ngoba yize umphumela wesikhumba ubukade ubonakala ngombala omnyama, nawo uguqukile. Ngakho-ke kungcono njalo ukukwazi jabulela amanoveli amasha nokubukeka kwesitayela. Yize umbala omnyama ungasihlanganisa nayo yonke eminye, asikwazi ukushiya eceleni ezinye izithunzi ezifana nobomvu. Ngoba siyazi ukuthi kungenye yabanentshisekelo enkulu nokuthi bazonikeza amandla ebusika. Ngakho-ke kufanele ihlale inathi ngaso sonke isikhathi. Vele, uma kukhulunywa ngama-shades, amathoni ansundu kungenye yezinto eziyisisekelo kule sizini entsha.
Ngakho-ke, manje usungakhetha phakathi kombala oyisisekelo omnyama, obomvu, onsundu futhi ngokuqinisekile uzothola okuluhlaza okungajwayelekile. Zonke zizoba ngasohlangothini lwakho ukukunikeza izitayela ezihamba phambili. Kulokhu sisele ne- amabhulukwe ezinqeni eziphakeme ngaphezu kokuba nomlenze obanzi. Kubukeka sengathi umqondo wezinye izikhathi ubuyela ukuzolungisa ukuthambekela kwanamuhla. Ngakho-ke, awukwazi ukungabi nawo amabhulukwe esikhumba, noma ngabe ubukeka kuphi. Ingabe yingubo yakho yenkanyezi yesizini?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » imfashini » Amathrendi » Zonke izinhlobo zamabhulukwe esikhumba zibuyela ekuweni
Amathiphu ama-3 wokunqamula kusuka kuselula yakho
Luyini uthando olucindezelayo?